Auto Play ပိတ်နည်း ( For Window7) ~ မျိုးကို
Auto Play ပိတ်နည်း ( For Window7)
09:07 Auto Play, Computer, How To, Technique, Window7No comments
ကိုတို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ Virus တွေကို ကာကွယ်တဲ့ နေရာမှာ Auto Play ကို ပိတ်ထားတဲ့ နည်းကလည်း တစ်ခု အပါအ၀င်ပါ ..။ အဲဒီ Auto Play ကို Window7မှာ ရိုးရှင်းတဲ့ ပိတ်နည်းလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်..။
Auto Play ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်တို့ စက်ထဲကို Memory Stick တို့ ၊ Hard Drive ၊ CD DVD တို့ ထည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာ အောက်က လို ပုံမျိုးလေး တက်လာတာကို ပြောတာပါ..။
1. Start က Search မှာ Auto Play လို့ ရိုက်ပီး ရှာလို့ ရသလို Control Panel မှာ ရှာလည်းရပါတယ်..။
2. အောက်ကလို ပုံလေးပေါ် လာပီးဆိုရင်တော့ ပုံမှာ ပြထားသလိုလေး အမှန်ခြစ် လေး ဖြုတ်ပေးပီး Save လိုက်ရင် ရပါပီ..။